Ihe akaebe na mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ dị iche iche na-emegide mmegide: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 4 Ka 2019	• 11 Comments
Enwere m akwụkwọ ruo ọtụtụ afọ na ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ a maara nke ọma bụ na azụ nke aka ha ma mezuo ọrụ ha na egwuregwu ebe a na-echekwa ikike dum nke echiche dị iche iche na echiche dị iche iche ma mee ka ha nwee uru na mmegiderịta. Nke ahụ bụ duality nke a na-achọ mgbe niile iji tinye ihe ndị ọzọ na mwepu mkpanaka n'elu voltaji elu na obodo. Ọ bụ egwuregwu nke e ji ụma wuo-na nkwarụ nke jikọtara ya na ịkekọrịta eziokwu, nhazi mmemme na nghọta. Ọrụ ndị bụ isi bụ ọrụ nzuzo na òtù nzuzo ndị ọzọ. Nke a abụghị naanị ihe na-eme na United States, kamakwa na Netherlands na n'eziokwu mba niile n'ụwa niile. Ọ dị mkpa ka ị ghọta na ya mere ọ bara uru igosi ụfọdụ ihe àmà.
Ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ Alex Jones website, dị ka ihe atụ.
Njikọ Njikọ Disinformation
Ihe edere n'okpuru bụ nkọwa nke isiokwu a, nke m na-etinye nsụgharị n'okpuru ebe a. Ọ bụ banyere ụlọ ọrụ a na-akpọ 'The Disinformation Company' na njikọ ya na Alex Jones.
Ọrụ nke ntụrụndụ a ma ama na-agba izu megide Alex Jones, gụnyere ọtụtụ ederede, dị ka Endgame: Ụkpụrụ maka Ntinye Nkwado Global na New World Order na akwụkwọ ya Azịza ya nye 1984 bụ 1776, ndị na-akwado Satanist na Alleister Crowley kesaara na / ma ọ bụ bipụtara ya ụlọ ọrụ Richard Metzger nke a kpọrọ The Disinformation Company, ụlọ ọrụ nke na-ejikọ ndị na-ekpere arụsị na ndị transhumanists. Metzger bụ onye na-emepụta ihe omume TV nke a na-akpọ Disinformation, Ụlọọrụ Disinformation na website Disinfo.com ya, na okwu ahụ 'ihe niile ị maara bụ ihe ọjọọ', nke na-elekwasị anya na utu aha na-eme ugbu a ma na-agba mbọ ịkọ nkwekọrịta, mgbaasị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụkọ, ezighi ezi na nkwuputa ebubo.
Metzger kwetara na ọ kọwara onwe ya dịka "agha" site na nwata ma na o ji nlezianya mụọ ọrụ nke Kenneth] Anger (onye na-ese fim Crowleyan nke jiri Crowley magick). Otu n'ime ihe kpatara ya bụ Metzger jikọtara ya na ihe nkiri ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ nakwa maka telivishọn na ya onwe ya (crowley) magick interests. "Ọnụma, onye na-emepụta fim nke Crowley, nke e dere n'okpuru ala, bụ isi ihe dị na ndị ọrụ egwú Laurel Canyon, ndị anwansi, ndị òtù ndị Manson Family na Satanskerk. Na njedebe, Meztger na-ele Ụlọọrụ Disinformation anya dị ka "ụlọ ọrụ magick" ma kọwaa:
Magick - nke Aleister Crowley kọwara dị ka nkà na sayensị nke ime ka mgbanwe dịka ọchịchọ - bụ isi ihe dị mkpa nke ọrụ niile anyị na-arụ na Ụlọọrụ Disinformation. Ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ anyị, mmepụta ihe ma ọ bụ usoro ntanetị anyị, echiche nke inwe ike imetụta eziokwu bụ ihe na-eme ka ọrụ anyị. Enwere m Disinformation Company Ltd. na omume dịgasị iche iche anyị na-ewere mgbe niile dị ka okwu mgbagwoju anya.
Na mgbakwunye na Alex Jones, ụlọ ọrụ Disinformation ahụ nwekwara ọrụ dị iche iche na-ederede ma ọ bụ nkwekọrịta, nke dịka Akpadoro ya: Agha Rupert Murdoch na Nyocha (2004), Uncovered: Eziokwu zuru ezu banyere agha Iraq (2004), Bush Family Families: The Best Democracy Money Can Buy (na-eduzi Greg Palast), Wal-Mart: Ọnụ Ahịa Dị Ukwuu (2005), Iraq maka ire ere: Ndị ọkachamara n'agha (2006), Ndabere Ndagide (ihe nkiri site na Michael Moore na-eme njem na mahadum na-ekwu okwu n'oge nhoputa 2004, yana 9 / 11: Pịa maka Eziokwu (2006), 9 / 11 Mysteries (2006).
Uninformation, nke a makwaara dị ka Disinfo Nation, bụ usoro telivishọn nke Metzger kwadoro, bụ nke gbasaa oge abụọ na Channel 4 nke abalị n'abalị "4Later" na mmemme mmemme na UK. Usoro nke 30 nke iri na isii mepụtara maka C4 na - emezi ka ọ bụrụ '' pụrụiche 'nke' elekere 'anọ maka' Sci-Fi Channel 'na America, ma ọ dịghị agbasa ozi ọma n'ihi ọdịnaya arụmụka ha. E wepụtara ihe ngosi anọ ahụ na DVD, ya na diski ego nke abụọ na-egosi isi ihe site na DisinfoCon, ihe omume nke 12 na 2000, nke na-egosi Metzger na ndị ọkachamara nke anwansi, gụnyere Marilyn Manson, Kenneth Anger, onye edemede Joe Coleman, Douglas Rushkoff, Mark Pesce, Grant Morrison, Robert Anton Wilson, Todd Brendan Fahey na ndị ọzọ.
Ihe ngbagha di omimi bu na ihe omuma ihe dika ihe nenwegh: Ihe atụ mara mma bụ nyocha Metzger na Disinfo Nation site na Ted Gunderson, onye bụbu onye na-elekọta FBI bụ onye a maara maka nyocha ya na netwọk nzuzo na nke zuru ụwa ọnụ nke ndị dị na United States ndị na-amọrọ ụmụaka ma debe ha n'omume ọjọọ nke Setan na àjà mmadụ. Otú ọ dị, akwụkwọ Metzger doro anya na ọ bụ ndị na-eme ihe ike, na ụdị nke 'ọchị' na egwu nke abụọ nke Robert Anton Wilson. Gunderson na-elekwasị anya na mmejọ n'ime CIA na ogige ndị agha, ọ na-ekwukwa na Southern California bụ akụkụ dị mkpa nke ọrụ omenala Setan. Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ Metzger na-azọrọ na ọ na-enye "nhụsianya miri emi na anya" na "ọnụ ọgụgụ gbara ọchịchịrị" na satanism nke oge a, ọ juxtaposes ihe Gunderson kwuru site n'ịkọ akụkọ banyere ìgwè ndị nwere obi ọjọọ satanic wannabes.
Vidio Metzger na-echeta otu nchọpụta nke Briten Channel 4 mepụtara na 1992, nke isiokwu ya bụ "Na-abụghị Nkwenkwe," nke kwuru na ya na-enye ihe akaebe nke mmebi iwu nke Setan (SRA). Andrew Boyd, onye na-arụsi ọrụ ike nke SRA na onye edemede nke Nkwupụta Ụgha, akwụkwọ banyere isiokwu ahụ. "E wezụga nkwenkwe" nwere nkọwa maka ma ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu na echiche nke ndị ọkachamara n'ịgwọ ọrịa, yana ajụjụ ọnụ nke onye na-agbapụta ndụ na-ajụghị ajụ "Jennifer" bụ onye kwuru na ya so n'òtù ahụ mere video ahụ.
Foto ndị a gụnyere ememe rụrụ arụ nke gbasara mmadụ nwoke a na-ahụ anya, ihe nnọchianya ndị a na-etinye n'ime anụ ahụ ya, otu nwanyị gba ọtọ agbụ na ịra n'ike, na ime ihe ọ bụla dị na nwanyị ọzọ e merụrụ emerụ na ikekwe ọgwụ. Ihe ọzọ na-egosi nwa agbọghọ nke tọrọ atọ ma tinye aka n'omume ime ihe ike. A na-atụle usoro ndị a site na ntinye nke mmekọahụ.
Ya mere Alex Jones nwere ike jikọrọ ya na onye nwere ọkachamara na ọkachamara ọkachamara na ọkachamara na Aleister Crowley na ngwa ha na mgbasa ozi. Aleister Crowley bụ onye guzobere otu mgbaasị akpụkpọ anụ a na-akpọ Thelema. Anyi na ekwu maka otu nkuzi nke Crowley kwuru na onye nke ime mmuo di na Cairo bu onye nwunye ya mere dika onye ozo. Nkuzi Crowley dabeere na chi ndi ozo banyere Ijipt. Akụkọ ifo oge ochie kwuru na ike Chineke dị na mbara ala. M na-edekarị aka na Saturn ofufe anyị na-ahụ gburugburu anyị. E gosiputara nke a na nkuzi Crowley. Crowley bụ otu n'ime ndị òtù Golden Dawn na RTD (Ordo Oriental Oriental). Nke ikpeazụ bụ nzukọ nke Templar nke yiri ka ọ ga-ejikọta ya na Pharaoh ndị Ijipt. Enwere ike igosi mmasị Crowley na akụkọ ifo ndi Ijipt.
Akọwawakwala m otú m si chee na ọbara na-achịkwa ụwa. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na Aleister Crowley na-emeso ndị ndú ụwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị isi. Ọ bụ Sergeant Pepper na-emetụta ụda egwú, TV na ụlọ ọrụ ihe nkiri. Crowley bụ dike nke The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, kamakwa, dịka ọmụmaatụ Ramses Shaffy. Crowley nwere ebe obibi ndị mọnk nke ya na Sicily ma kọọrọ ya na ya nwere ụmụ nwoke nọ n'ebe ahụ. Crowley ji ememe mmekọahụ iji nweta ọnọdụ ime mmụọ ka elu. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ememe Crowley bụ "Eroto-comatose Lucidity" nke pụtara ịtụgharị "ị nweta enyemaka site na njedebe nke onye a na-ahụ maka ịlụ nwoke". Nke ahụ nwere ike ịṅụrịrị ọṅụ maka ya na-atọ ụtọ onye na-agụ ihe, ma ọ bụghị ihe na-adịghị njọ. Ị ga-ahụ nkọwa nke ememe ahụ ebe a na, na nchịkọta, na-abata n'eziokwu bụ na a na-awakpo nwa okoro na-enwe mmekọahụ ma ọ bụrụ na o rute ụdị ụfọdụ nke uche na uche ya na-esi n'ahụ ya pụọ. Nke a na-eme ka nwoke dinara n'ike n'ike bụ otu n'ime ọtụtụ ememe mmekọahụ nke Aleister Crowley, onye nwoke na-efe ofufe.
Crowley nwere ike ịmegharị usoro nke anwansi ya na egwu, TV na ụlọ ọrụ ihe nkiri. Mgbe ahụ, ị ​​ga-eche echiche banyere ihe ndị dị n'okpuru nchịkwa, dịka 'ịgbanwe speach' na ọtụtụ usoro ndị ọzọ. Ụfọdụ n'ime ndị anwansi (akpọ 'magick' site na Crowley) nwere ike ịchọta egwu na Beatles na ìgwè ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ. Onye magick bu ihe gbasara usoro ihe omimi na ememe anwansi na ihe omuma ndi n'eme ihe; enweghi anya ya anya. N'eziokwu, ị nwere ike ikwu na magick nke Crowley aghọwo ọkọlọtọ maka egwu niile, TV na ụlọ ọrụ ihe nkiri.
Jimmy Savile, onye kachasị na TV na UK na-eme ihe ọjọọ, na-ewere onwe ya na ọ bụ anwansi na-agbaso nzọụkwụ nke Aleister Crowley. Savile nwere ike ịgagharị na UK iji nwee ike imetọ ụmụaka na ndị nkwarụ na uche. E kwuru na a gwara Savile ọbụna na ọ na-eme mkparịta ụka n'anụ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Savile, onye nwụrụ n'October 84 n'oge 2011 dị na October, bụ ihe kachasị njọ na Britain mgbe ndị uweojii mara ọkwa na o gburu ma ọ dịkarịa ala ndị 450 ndị ruru afọ asatọ ruo 47.
Eziokwu dị mfe na onye dị ka Alex Jones nwere ike jikọta ya na onye guzobere Ụlọ ọrụ Disinformation na-ejikọta ya na nkuzi nke Crowley. ị nwere ike ịpụta site na nke a na anyị na-emeso onye ọrụ nke usoro ụwa (pharaonic) iwu.
Council for National Policy (CNP) na John Birch Society (JBS) njikọ
Alex Jones nwekwara ike jikọtara ya na ụfọdụ ndị na-eche echiche nke ọma, bụ Council for National Policy (CNP) na John Birch Society (JBS).
Okwu CNP hiwere na 1981 site Tim Lahaye na Paul Weyrich. Lahaye bụ onye America na-ekwusa, ọkà okwu na onye edemede akwụkwọ Ndị Kraịst. Ọ bụ onye Kristian ndị Kraịst, ọ lụkwara onye edemede bụ Onye Kraịst bụ Beverly LaHaye. Weyrich bụ onye ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, onye na-ekwu okwu (chee CIA) na onye nchoputa ụdị ọrụ dị iche iche dị ka The Heritage Foundation, na Free Congress Foundation na American Legislative Exchange Foundation. Ya mere, Weyrich maara nke ọma ebe ọ ga-esi enweta ego ma ọ bụrụ na anyị nụ ego buru ibu, mgbe ahụ, anyị amataworị onye na-achịkwa egwuregwu ahụ. CNP bụ ụdị American Bilderberg. Nzuko ya nile bu ihe nzuzo. Ọ dịghị ihe ọ bụla na-eri. Nzukọ ahụ na-etolite ụdị nche anwụ maka ndị 'na-achọ eziokwu' nke ndị ọkà mmụta Zionist Judeo-Christian zoro.
Mgbe ahụ ị nwere akụkụ aka nri John Birch Society (JBS). John Birch Society bụ otu ndị America na-agbasasị ìgwè, tọrọ ntọala na 1958 site na-azụ ahịa-activist Robert W. Welch, Jr. dịka isi okwu mgbasaozi na ndị isi obodo. N'ihi ya, anyị na-ahụkarị ego buru ibu. Nke ahụ ga-ebularịrị enyo. Welch chọrọ ịmepụta "nzukọ nzuzo", nke "ga-arụ ọrụ zuru oke na ọkwa niile."
Ị gụrụ akwukwọ a emesị chọpụta otú Alex Jones nwere ike isi jikọọ na òtù ndị a. Otú ọ dị, ọ dịkarịrị mma iji lee anya na ihe ngosi nke dị n'okpuru ebe a. Ọ bụrụ na, mgbe i weghaara oge iji mụọ ihe niile a, ị ga-amalite ịhụ ntakịrị otú ogwe aka mgbasa ozi mgbasa ozi ọzọ si dị n'akpa uwe onye ọkachamara, enwere m olileanya na ị ga-aghọta na ole na ole nwere ike ịchọta. Ya mere m kwadoro ya isiokwu a ka ị gụọ banyere ọnọdụ ahụ na Netherlands. Olileanya na nke a ga-enyekwara gị aka ịhụ na ọ dị mkpa ịkwado ezi edemede edemede (onye naanị ya na Netherlands nke na-ebuli ihe a niile).
Biko gụọkwa ịzaghachi, nke ị ga-ahụ njikọ ya na ebe nrụọrụ weebụ Dutch.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: conspiracyschool.com, scribd.com
Robert Jensen na Arnold Karskens 'akwụkwọ ojii NOS na-achịkwa' mmegide na-egosi: ubi adịghị na ya
Tags: aleister crowley, Alex, CNP, Company, Nchịkọta Maka Ntube Mba, Disinformation, achịkwa, ihe eji eme ihe, JBS, Jimmy, John Birch Society, Jones, mmegide, Richard Metzger, Savile
4 May 2019 na 23: 17
Ị nwere ike ịgbatị ya na nje Agha (T), ị mepụtara onye iro, a na-akpọ ya Al Qaeda / Isis, nke na-enye gị ikike ịbanye aka.
N'ịlaghachi na Crowley / RTD, nna Aleister Crowley nọ na òtù nzuzo a na-akpọ Plymouth Brethren. Òtù a dị oké mkpa n'ịkpali Ndị Kraịst Evangelical na ala America. mepụtara Akwụkwọ Nsọ na ndị niile na-ebu Zionism gaa eluigwe
Òtù na-akwado ụda na oge Zionist na-agba oge taa (n'ụzọ ime mmụọ).
4 May 2019 na 23: 44
Daalụ maka mgbakwunye dị mkpa. M ga-ehichapụ ihe ị zitere m site na e-mail. Daalụ maka nke a.
Ihe ọhụrụ gị banyere CNP bụ mmalite dị mkpa, ozi ahụ sitere na website nke Joel vd Reijden:
N'ebe ahụ kwa, anyị na-ejikọta njikọta nke elu. mgbasa ozi na Netherlands megide Micha Kat / Jeroen Hoogewij / Niburu wdg.
4 May 2019 na 23: 55
ị nabatara gị! 😀 na ebe a isiokwu gị nke m na-ekwu
Jack Abramoff na njikọ ya na Robert Rubinstein na 'Rusty Nail'
E bipụtara na Apr 3, 2014
5 May 2019 na 00: 08
Ọganihu dị mma.
5 May 2019 na 00: 12
N'isiokwu a, m kọwaara njikọ Martin Vrijland defamation na nkwutọ onye nkesa Jeroen Hoogeweij na Aleister Crowley RTD:
Jeroen Hoogeweij, bụ isi iyi ụgha niile na nkwutọ nke a pụrụ ịchọta banyere Martin Vrijland na ịntanetị, echebebeghị njirimara ya. Imirikiti ihe a ka nwere ike ịchọta n'Ịntanet na ozi ndị na-enweghị isi sitere n'aka Jeroen ma nwee ihe mgbaru ọsọ doro anya nke imebi nkwenye nke isiokwu Martin Vrijland. Nke a ka nwere mmetụta n'ihi na Google jụrụ iwepu njikọ yana n'ihi na ekwupụtaghị m okwu.
E nwere ike ịchọta akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ntanetị; n'etiti ihe ndị ọzọ na weebụsaịtị 'hoaxwiki' nke na-egosi dị elu na nyocha ọchụchọ Google. Ekpebiri m na agaghị m agbanyekwu ume iji wepụ ihe a. A sị ka e kwuwe, ozugbo m malitere ịkọwa ebe ụgha dị, ebe nrụọrụ weebụ dị na ajụjụ ahụ na-arịgo n'ime pen ọzọ ka ị gbanwee ma ọ bụ wepụ ihe. Dịka ọmụmaatụ, na n'oge gara aga, ọ sịrị na m enyoola onye ọrụ mbụ. Otú ọ dị, mgbe m bipụtara ihe àmà na saịtị m na agwawo m ụlọ ọrụ a okwu ọma na nke ọma, akụkọ ahụ wepụrụ ngwa ngwa. Nsogbu nke a nke ụma na-ekesa disinfo bụ karịa ihe niile ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ na-achọ ikwere na ya, ya mere ọ bụ nanị iji dochie. N'echiche ahụ, ọ bụ ya bụ usoro dị irè iji bipụ onye edemede dị oke egwu ma bibie aha ya.
Ka ọ dị ugbu a, arịọrọ m ọtụtụ ndị ọkàiwu ka ha bulie ikpe m ma jupụta ala ahụ maka na agaghị mzi nkwupụta m. Ruo ugbu a, ọ dịghị onye ọ bụla na-anwa anwa anwụrụ mkpịsị aka ya iji kọwaa steeti. A ka nwere ike họpụta ya ka ọ bụrụ onye njikwa doro anya, n'ihi na enweghị nkọwa zuru ezu na nkọwa doro anya nke nwere ihe àmà siri ike bụ nke a na-ebughị n'uche. Nke a ọ ga - abụ eziokwu na o doro anya na steeti nwere aka siri ike na mkparị na nkwutọ a n'ịntanetị? Edebekwala m ikpe m na Sven Hulleman iji chọpụta ma ọ ga-agba aka ọkụ ya.
Ọ na-eju m anya na ọ dị mfe nke a bụ Jeroen Hoogeweij nagidere nkọcha na nkwutọ ahụ n'oge ahụ. Karịsịa n'ihi na nke a na-ata ahụhụ n'ụzọ doro anya. Ọbụna m bipụtara akwụkwọ ọchịchị ya ma o doro anya na Jeroen rụrụ ọrụ maka steeti. Ruo nwa oge, Jeroboam yiri ka ọ na-apụ n'anya site na radar na na-agba asịrị njem m gwara ya na ya ga-arịa cancer. Ugbu a anaghị m ekwere na ịgba asịrị, ma ọ bụ ihe dị ịrịba ama na ọ naghị arụsi ọrụ ike na saịtị ndị a ma ama bụ ndị e ji mee ihe iji mee ka Martin Vrijland na-agbaze (ma na-arụ ọrụ na ya oge zuru ezu). N'ihi ya, ọ tụrụ m n'anya nke ukwuu mgbe onye na-agụ akwụkwọ na nso nso a gosiri m na akaụntụ twitter tinyere aha Naomi Hoogeweij.
Ndi oro ekeme ndidi Jeroen ama enen̄ede ọfiọk ke imọ idi owo? Nke a ọ bụ n'ezie Jeroen? Ndi enye ama ayak eto? Ọdịdị? Echere m na ọ bụ egwuregwu. Ọ ga-eme ka ikpe m bụrụ ihe na-adọrọ mmasị n'ụzọ iwu kwadoro! Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na i meela nkwupụta megide onye na onye ahụ emeela ka ọ bụrụ na ị ga - emeghachi omume na okike? Ebube!
Jeroen anọwo n'ihu na nzukọ Aleister Crowley RTD. N'ime ụdị nzuzo ndị dị otú ahụ Luciferian, transgenderism yiri ka ọ bụ okwu na-esekarị. Ọbụna o yiri ka ndị a n'ụwa nile na-akwalite 'okike na-anọpụ iche' na ahịa 'transgender'. Enwomala m ihe a n'isiokwu m n'isiokwu a gbasara nke a, nke m kwadoro na nke a bụ isi n'ihi echiche ahụ bụ Lucifer. Onye na-amaghị akara akara nke Luciferian na-egosi na ọ ga-anọchi anya ya na ara na phallus. Ikekwe ihe kacha mma maka nwoke a na-emeri ya bụ Eurovision Song Contest na 2014, Conchita Wurst. Dịka ọmụmaatụ, gụọ isiokwu a maka nkọwa zuru ezu. Ya mere, ọ dabara na foto a na Jeroen agbanwewo onwe ya.
Ka ọ dị ugbu a, Jeroen (nke a bụ Neomi) na-arụsi ọrụ ike n'ịntanetị ma ghọọ onye edemede na-ede akwụkwọ na jalta.nl. Mgbe m chọpụtara nke a, echiche m na a na-aghọgbu m ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ bụ eziokwu: Jeroen bụ Neomi ugbu a! Jeroen na-ekwusakwa banyere Yalta banyere ahụmahụ ndị ọ na-enwe na transvender na mmeghachi omume nke gburugburu ebe obibi ha.
Ma eleghị anya, m ga-achọ ka Naomi nwee ọganihu ọ bụla n'ọkwá ọhụrụ ya na Yalta. Ka anyị nwee olileanya na mgbasa ozi LGBTQ nwere ike ime ka ọtụtụ ụmụaka kwenye na ịmalite inwe obi abụọ banyere okike ha na ịmalite iche echiche banyere usoro nhazigharị ahụ dị mma. Jeroen nwere ike ịbụ ihe nṅomi ha. Ọ dị ka ọ bụ ezigbo ọchị. Nakwa na Pauls Puber Kookshow anyị ahụworị otú ọ dị mma ị nwere ike ile anya ma na HEMA ị nwere ike ịzụta uwe gị.
Echere m na ọ bụ ihe ihere na agaghị m enwe ohere ọ bụla ọzọ iji mee ka m nwee ike ịlụ ọgụ banyere ọgụ nwoke ma ọ bụ nwoke iji nye ya akụkụ aka nri siri ike ma ọ bụ kụọ ọtụtụ ihe n'okpuru bọlbụ ya. Ekegharị! Ka o sina dị, enwere m iwe na ebubo m ebubo na mmegbu nke ndị inyom (ọ bụ ezie na n'aka Jeroen, ma na nke ọzọ, Jeroen adịkwaghị), ya mere ana m achọ ịgwa Naomi okwu ịhụnanya: Naomi, m anya dị obere nwa! Anyị nwere ike ịmalite ọzọ ugbu a na ị bụ nwanyị?
5 May 2019 na 00: 23
Nwere ọmịiko Martin ọ dị oke njọ ..
"Enweghị m ike na nke a na-eme na Netherlands"
* EBE ANYỊ dị elu na ọnọdụ dị na NEW MEDIA AREA maka iche nke atọ ụwa Agha *
Martin gara n'ihu ịkọ akụkọ ọzọ ma ọ bụ karịa n'otu ụzọ ahụ gbasara ikpe Demmink ruo mgbe ọ 'kpuchie' na 25 March mgbe mkpọsa ya malitere megide 'Mafia group Poot / Ottens / Rubinstein / Kat / Krol / Abramoff / Hoogeweij'.
Vrijland na-agbapụta ngwa ngwa wee si na oge ahụ bịa ngwa ngwa ma ruo nnukwu mwute na ọkwa mara na Jeroen Hoogeweij bụkwa akụkụ nke ìgwè ndị na-ahụ mafia.
5 May 2019 na 00: 52
Ee, ana m anata ozi ahụ banyere Hoogeweij site na onye na-ekwu na ọ maara Jeroen / Neomi nke ọma.
Enweghị m n'aka ma ọ bụrụ na nke a abụghị ọnyà ma ya mere enweghị ike ịsị na ozi ahụ ezitere ziri ezi, ma nye nkọwa nke ozi m nwetara, o yiri ka ọ bụ isi iyi.
Ihe mere na onye ogbenye dara ogbenye Jeroen (nke a bụ Neomi) nwere ike ịgba ụgwọ dịka ọkàiwu a dị oke ọnụ dịka Hammerstein dị na ebe ndị ọzọ, dịka onye edemede si kwuo.
5 May 2019 na 02: 05
Mmekọahụ na-abụ akụkụ nke nke a, lee ihe merenụ na NXVIM na nso nso a, nke onye Bronfman na-enyo enyo kwadoro bụ nke nwere ike jikọta ya na Epstein na Branson ọzọ (Virgin Records ihe na aha) usoro kompromat oge gboo
https://www.henrymakow.com/2019/04/ Zionist-Chinekefather-Samuel-Bronfman% 20.html
5 May 2019 na 07: 27
Ọfọn, ọ gaghị abụrụ ihe ijuanya ịmara na Aleister Crowley bụ onye na-arụ ọrụ nzuzo nke 'Bekee,' n'ụzọ, nledo. N'ihi nke ahụ, ị ​​nwere ike ime ọtụtụ ihe egwu, nsogbu ma wepụ ya.
5 May 2019 na 09: 52
Ọ na-arịa ọrịa nke ukwuu maka okwu ndị ahụ niile na-ere mkpụrụ obi ha iji ghọgbuo onye ọ bụla. Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na ha emesịa na-arịa ọrịa ndị a nile.
A ga-ekwuputa otu ndị na-adịghị esonye, ​​ma ejiri m n'aka na otu a ga-emeri!
Debe ya na Martin ma echefula na ìgwè ahụ dị oke ma na-eto eto ma ha ghọtara na ịgha ụgha nke eziokwu na aha gị dabeere na ụgha.
5 May 2019 na 10: 00
Nke ahụ bụ atụmatụ. Jipụ onye ọ bụla n'ite egwu egwu ahụbeghị. Jeroen Hoogeweij (ezigbo onye agbata obi nke Micha Kat n'oge na-aga) ka e nyere ya ohere iji weebụsaịtị ya (nke Swapichou bụ akụkụ bụ isi) iji gbaa ọkụ kpamkpam Martin Vrijland. A na-awakwa Micha Kat maka ọdịdị, ma ọ dịghị mgbe ọ ga-emerụ ahụ.
Anyị na-ahụkarị ebe nrụọrụ weebụ a na-achọpụta na a na-awakpo ha (achịkwa), ma nke ahụ na-arụ ọrụ; dịka ọ dị ugbu a na nkwụsị ọrụ nke Facebook ibe ha. Ebe nrụọrụ weebụ ndị a aghaghị, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, nyefee iwe ma mee ka ndị na-eso ụzọ ghara ịrụ ọrụ.
Ọ bụ egwuregwu dị iche iche (dị ka ihe ndekọ ahụ na-egosi nke ọma) na n'ime ya ihe niile nke mmadụ psyche na-arụ ọrụ ma na-agbanye ume ọ bụla.
" Facebook na-egbochi ọtụtụ saịtị mgbasa ozi ọzọ dịka Infowars na ndị ọzọ: a kwukwara saịtị a
Ihe akaebe ndị ọzọ na-egosi mgbasa ozi ndị ọzọ a na-achịkwa site n'aka onye akaebe nke na-achọpụta Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij) »
Nleta nile: 12.432.634